उपत्यकामै २३९ संक्रमित, एकै दिन थपिए ५४ जना, राजधानीका चारै कोरोना अस्पताल भरिए « Pahilo News
उपत्यकामै २३९ संक्रमित, एकै दिन थपिए ५४ जना, राजधानीका चारै कोरोना अस्पताल भरिए
प्रकाशित मिति :7July, 2020 8:04 am
काठमाडौं, २३ असार । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कन्ट्रोल रुम सोमबार बिहान निकै व्यस्त थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १ सय ६१, ललितपुरमा ३९ र भक्तपुरमा ३९ जना गरी उपत्यकामा हालसम्म २ सय ३९ जना संक्रमित छन् । सोमबार मात्रै काठमाडौंमा २४, ललितपुरमा २० र भक्तपुरमा १० जना गरी ५४ नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् ।
ईडीसीडीका अनुसार सोमबार अपराह्नसम्म १ सय ५३ संक्रमित आइसोलेसनमा छन् । तीमध्ये केहीको आईसीयूमा भर्ना गरेर उपचार भइरहेको छ । ललितपुरमा १ र काठमाडौंमा १ जनाको मृत्यु भएको छ । सोमबार संक्रमण पुष्टि भएका ५४ जना र आइतबार पुष्टि भएका २ जनालाई सोमबार रातिसम्म अस्पताल ल्याइएको छैन ।
अहिले टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ३२ जना, पाटन अस्पतालमा ४६ जना, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा ५७ जना, दुवाकोटको केएमसी अस्पतालमा १८ जना संक्रमित रहेको ईडीसीडीले जानकारी दिएको छ ।
पाटन अस्पताल स्रोतका अनुसार ४५ शैंयाको कोभिड युनिट भरिएको छ । आइसोलेसनमा समेत ८९ जना शंकास्पद बिरामीलाई भर्ना गरेर राखिएको छ । ‘संक्रमितहरूले फोन गरेर हामी कहाँ जाने भनेर सोध्छन्, हामीसँग खाली बेड नै छैन,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयको हटलाइनमा फोन गरेर सोध्नुस् भन्नुको हामीसँग पनि अर्को विकल्प छैन ।’
ईडीसीडीका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार काठमाडौंमा केही समययता जिल्लाबाट आउने तथा विदेशबाट आउनेको संख्यासँगै संक्रमितको संख्या पनि बढेको हो । ‘अहिले पनि संक्रमितको विश्लेषण गर्दा अधिकांश संक्रमण विदेशबाट भित्रिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा लोकल ट्रान्समिसन पनि छ तर समुदायमै गइसक्यो भनेर ठोकुवा गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।’
उनका अनुसार वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको अहिलेको अवस्था भनेको ‘स्प्रोडिक केसस’ (छिटपुट) को हो भने अन्य प्रदेशलाई ‘क्लस्टर अफ केसस’ (समूहगत रूपमा) मा राखिएको छ ।
‘अहिलेसम्म उपत्यकामा समुदायमा संक्रमण पुगेको छरछैन यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ डा. पाण्डेले भने, ‘हामीले ट्राभल हिस्ट्री नदेखिएका संक्रमित भेटिएका स्थानबाट करिब एक सय जनाको हाराहारीमा थ्रोट स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न थालेका छौं । सबै १२ स्थानमा परीक्षण सकिएपछि अवस्था के हो भन्ने थाहा होला ।’
जसअन्तर्गत तीनकुने, नख्खु र कोटेश्वरबाट नमुना संकलन गरेर परीक्षणसमेत भइसकेको छ । त्यसमा सबै नमुनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । यस्तै टोखाको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ भने शंखमूल र बोडेबाट सोमबार नमुना संकलन गरिएको छ । डा. पाण्डेका अनुसार अन्य बाँकी स्थानबाट पनि छिट्टै नमुना संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ ।
‘आजै हामीले गंगालाल अस्पतालबाट पनि फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने ५० जना स्वास्थ्यकर्मीको पनि नमुना संकलन गरेका छौं,’ डा. पाण्डेले भने । उनका अनुसार हालसम्म उपत्यकाका अस्पतालमा आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितमध्ये लगभग सबै जनामा कोरोना संक्रमणको कुनै लक्षण देखिएको छैन ।
१२ स्थानबाहेक पनि पुनस् थप केही स्थानमा ट्राभल हिस्ट्रीबिनाका संक्रमित फेला परेको उनले बताए । ‘हामी उपत्यकाका यी १२ स्थानबाहेकका अन्य केही स्थानबाट पनि थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उपत्यकाको वास्तविक अवस्था छर्लंग हुन्छ ।’
देशमा पहिलो पटक कोराना देखिएको युवालाई पनि काठमाडौंकै तथ्यांकमा समावेश गरिएको छ । फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै चैत ४ मा नेपाल आएकी मैतीदेवीकी एक युवतीमा चैत ९ मा कोरोना देखिएको थियो । उनी मुलुककै दोस्रो संक्रमित हुन् । उनलाई कोरोना देखिएलगत्तै चैत ११ देखि सरकारले देशमा लकडाउन घोषणा गरेको थियो ।
यसरी काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको संक्रमितको तथ्यांक केलाउँदा असार १६ देखि मात्रै तीन अंकले बढेको देखिन्छ । भक्तपुर र ललितपुरको तुलनामा काठमाडौंमा संक्रमित दर पनि बढी छ । असार १६ मा ७२ जना संक्रमित रहेकामा १८ मा १ सय १० पुगेको थियो ।
काठमाडौंमा आइतबार संक्रमितको संख्या १ सय ३७ थियो । सोमबार यो संख्या बढेर १ सय ६१ पुगेको छ । ललितपुरमा जेठ ६ मा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमै खटिएका चिकित्सकलाई संक्रमण देखिएको थियो । भक्तपुरमा भने सुनसरीबाट आएर ठिमीमा साथीको कोठामा बसेकी युवती र सशस्त्र प्रहरीको जवानलाई पहिलो पटक कोरोना देखिएको थियो ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा १० वर्ष उमेर समूहका ७ जना, ११ देखि २० वर्षका ९ जना रहेका छन् । यस्तै २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ४७ महिला तथा ३७ जना पुरुष छन् । यस्तै ३१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ३५–३५ जना महिला र पुरुष छन् ।
४१ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका १८ जना महिला तथा २२ जना पुरुष, ५१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका २ जना महिला तथा १३ जना पुरुष, ६१ देखि ७० वर्ष उमेर समूहका ३ महिला तथा ६ पुरुष, ७१ देखि ८० वर्ष उमेर समूहका १ महिला, ८० वर्षमाथिका २ महिला र २ पुरुषलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट